Press Release of the Foreign Ministers’ meeting for the 6th ACMECS Summit – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Press Release of the Foreign Ministers’ meeting for the 6th ACMECS Summit
The Foreign Ministers’ meeting for the 6th Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy Summit was held in Nay Pyi Taw, MICC-1 on 22nd June 2015 with the participation of Deputy Prime Minister and Foreign Minister from the Lao People’s Democratic Republic, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Kingdom of Thailand, Foreign Minister of the Republic of the Union of Myanmar, Deputy Foreign Ministers from the Kingdom of Cambodia and the Socialist Republic of Viet Nam.
The Meeting was chaired by Union Minister U Wunna Maung Lwin and ministers have exchanged views on ACMECS cooperation and future direction.
The member countries discussed the drafts of Nay Pyi Taw Declaration and Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy Plan of Action (2016-2018).
22nd June 2015.
(၆)ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖယား-မဲခေါင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ MICC-1 အဆောက်အဦတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင်‌့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင်‌့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်မှ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသော အက်မက်စ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများက အက်မက်စ်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြင်‌့ရေးနှင့် အနာဂတ် ဦးတည်ချက်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ်မှု ပြုခဲ့ပါသည်။
တက်ရောက်လာသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖယား-မဲခေါင် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် ထုတ်ပြန်မည့် နေပြည်တော် ကြေညာစာတမ်းနှင့် ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖယား-မဲခေါင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာရှေ့လုပ်ငန်းစဥ် (၂၀၁၆-၂၀၁၈)များအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်